Gaaffii fi Deebii Dr Kadidaan Jaal Goollicha Dheengee waliin godhe Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaaffii fi Deebii Dr Kadidaan Jaal Goollicha Dheengee waliin godhe
Gaaffii fi Deebii Dr Kadidaan Jaal Goollicha Dheengee waliin godhe barreeffamaan GSagaleen Qeerroo Bilisummaa akkasiin isiin gaheera warreen argachuu ykn isinii banamuu dideef.
Dr Kadida: Eenyu akka taatee fi maal akka taate mee dawwattoota keenyaaf of ibsi?
Jaal Goollicha: Ani maqaan koo Goollicha Dheengeen jedhama. Ajajaa WBO zoonii kibbaati.
Dr kadida: Hayyee maal irra jirtu amma gabaabaatti nutti himaa?
Kanaan dura hoggansa Finfinnee jiru irraa adda baatanii jirtu jedhamee himamaa ture , isinis labsitanii turtan hoggana mataa keessaniis akka filattan himamaa ture mee isa irratti nuuf ibsaamee?
Jaal Goollicha: Tole . Egaa nuyi akka WBO tti erga ABOn qabsoo karaa nagaa filatee Biyyatti deebi’ee as haallan adeemsa araaraa turan keessatti danqaalee fi haalli daran iyyuu gara hammeenyaatti deemuu fi kanaaf wal amantaan ijaa tahe hin mul’anne.
Akka kanaan adeemsichi araaraa sun gufuulee adda addaa fi danqaa garaa garaa mootummaa irraa waan mudateef, akkasumas loltuu WBO kanneen hoggana biyyaatiin gale sana bakka leenjiirra turan sanatti dhiibbaa fi dararamni adda addaa irra waan tureef,walumaagalatti halli nagaa jedhamu sun nagaa araaraa fi amansiisaa fi bifa iftoomina qabuu fi bifa fuulduraaf mul’anni tokko itti argamu hin turiiniif, akkasumas mootummaan Ethiopia gama kaaniin osooma araara ABO waliin danqaan akkasii deemaa jiruu deebi’ee bulee bultii 15 keessatti WBO ni hiikkachiifna jechuun lola nurratti labsee; lixa oromiyaa irratti labse, godinaalee kibbaa gara Gujii Bahaa fi lixaa,naannoo liiban akkasumas solooloo bal’aatti labsee WBO waliin hanga ammaatti gara baatii 9f lolatti jira.
Kanaaf nuyi kan kenne dhuguma hoggansi ABO qabsoo karaa nagaa filatee; qabsoo karaa nagaa hoggansi ABOn filatus gama mootummaatiin nagaan nuyi eegne sun akka eegametti deemamaan jiru.
Danqaa fi bu’aa bahii adda addaan miidhaan daran hammaachaa,hidhaan hammaachaa, gochaaleen sukkaneessaa adda addaa waan deemaa tureef erga ABO dabarsee WBO ummata bal’aa fi abbootii Gadaattuu dabarsinee kennine hogganni ABO jedhee, WBOn ogummaa waraanaa qaba, aadaa fi amala waraanaatis beeka,saayinsii fi facaasaa waraanatis ni hordofa.
Kanarraa kan ka’e ummata oromoo bal’aatiif erga dabarsamee kenname booda gufuu tahee waan nutti mul’ateef akka kanaan hoggansi ABO Finfinnee galee ,WBOn bosona jiru ofii erga karaa nagaa filatee booddee hoggansa mataa ofii WBOn qabaachuu qaba . Wal Taliigna ,wal tarkaanfachiifna,wal qindeessaa ,wal sochoosaa kan jirru.Goblaan WBO kaayyoo ABO irraa osoo adda hin bahiin, Akeeka ABO irraa osoo adda hin bahiin, Akeeka ummatni oromoo ganama qabatee manaa bahe waggaa dheeraadhaaf lubbuu ilmaan isaa jijjiirraa hin qabne furmaata itti kenne, ummatni oromoo biyya oromoo bilisoomsuudhaaf kan ilmaan isaa itti dhabe sana karaatti akka hin hafneef jecha WBOn bulchinsa keessaa ummata ofii dhaabbachuudhaan ,ofii wal taliigaa, wal sochoosaa, wal qindeessuudhaan, akkasumas sagantaa siyaasaa ABO kaleessa qabatee fi dheera ABO kaleessa irratti of kenne sanarratti hojjechuudhaan Akeeka ABO kaleessaa sanarratti wal utubnee socho’uu jirra jechuudha.
Dr kadida: erga labsii hoggana haaraa filuu labsitanii booda ibsa karaa keessan kan qabxii 4 qabu kennitanii ture; inni hoo maal irra jira ibsi isin kennitan sun? Fknf dhimma bobbaa WBO jabeessuu jedhu irratti hoo?
Maal irra jirtu?
Jaal Goollicha: eeyyee akka WBOtti akkuma beekamu WBOn biyya isaa oromiyaa keessatti socho’uutti Kira, bakka har’aatti socho’aa jira,naannooleee bal’aa godinaalee Gujii keessatti, Boorana keessatti socho’aa jira,akkasumas G/galeessa irratti, lixarrattis haalaan socho’aa jira.
WBOn hanga ammaatti gara baatii 9f mootummaan Ethiopia loltoota RIBtiin wal hudhee qabuudhaan hangs ammaatti socho’aa jira,lolaas jira,kufee kufgiisaas jira. WBOn calqaba kaleessa baheef fiixaan bahuutti jira jechuudha.
Dr kadida: lola mootummaa waliin gaggeessaa jirtan mootummaan akka isin injifateetti, miseensi keessanis danuu akka waan harka kennaa jirutti Ibsaa jira. Mee isin as irratti maal jettu?
Miirri WBO hoo maal fakkaata?
Jaal Goollicha: akkuma beekamu mootummaan Ethiopia takkaayyuu dhugaa dubbateen beeku, yoo moo’ames moone jedha. Dhugaa lafarra jiru baatii WBOn waraana mootummaa Ethiopia kanaan lola gaggeesse keessatti injifannoon karaa dirree lolaa hundumaa WBOn milkoomina guddaa fi injifannoo olaanaa cululuqaa galmeessaatuma jira. Waraanni mootummaa Ethiopia WBO dura dhaabbachuu dadhabuudhaan gochaa hammeenyaa ummata oromoo bal’aa irratti yakka waraanni sadarkaa Addunyaa tti iyyuu takkaa mul’ata hin beekne waggoota 27 Durban kan EPRDF TPLfn taayitaa fi aangoo biyya Ethiopia jedhamu qabattee Turteyyuu yakki waraanaa hangana mootummaa oromoo irratti hin rawwatamne.
Akka fakkeenyaatti WBOn waan moo’amaniif ijaw haaloo WBOtiin nyaachistan jedhee ummata oromoo irratti haaloo bahuu,hojii dalaga guyyaa guyyaa godhatee godinaalee Gujii keessatti yoo xiqqaate maatii gara 7000 buqqisee qonni isaa suuraa fi furaa, boloqqee, boqolloo,biqiltuuwwan fara garaa ummatni Kan qabu, qabeenyaa inni qabu loon dabalatee re’ee fi Gaala hundumaa maatiin yoo xiqqaate 7000tti shallagamu buqqisee, miidhee bakka jireenyaa dhabsiisee,facaasee keessattuu ijoollee ,haadholii ,manguddooliifi abbootiin Qeerroo fi Qarreen kan tahu ummatni akkanaan buqqaafaman.
Kana qofaas miti ummata bakka buqqifaman irraa ariiyee hiyyoomsuun bakka karaa konkolaataa fi bakka warra mootumaatiif mijooftutti walitti sabasabee gandatti walitti deebisee hiyyoomsuudhaan ummata oromoo mancaasaa kana jiru, yoo xiqqaate ummatni nagaan hiriirii hidhateen beekne,quote bulaan ,tikfataan akkanatti yoo xiqqaate namni 2000 godina Gujii lamaan keessatti mootummaa kanaanhojiin aka tahee jira.
WBOn garuu hanga ammaa injifannoo boonsaa galmeessuutti jira. Mootummaan Ethiopia immoo faallaa kanaa ummata oromoo dararuudhaan, ajjeesuudhaankan WBOn isaan hin goone kannofii isaa godhe akka waan WBO godheetti itti ololuudhaan akka ummatni keenya abdii muratu, ajjeechaan abdii murachiisuudhaan, qabeenyaa isaa saamuun itti bobba’ee jira. Isa kana immoo gonkuma ittin milkaayu.
Dr Kadida: Ummatni maqaa WBOn jedhamuun iddoo hundatu hidhamee dararamaa jira, isin maaliif harka kennitaniin galle? mootummaan aangoorra jiru kan oromooti isin maaliif hin galle? Jaal Goollicha: kkkkkkk! Yeah mootummaa oromootu aangoorra jira harka kennitanii maaliif hin galle isa jedhamuun 1ffaa mootummaa oromoo inni jedhan kun idolojii fi Akeeka ummata oromoo tarkaanfachiisaa jira moo hin jiru?
Kan oromoon beekuu qaba dhugaa jiru, mootummaan kun maqaa ummata oromoo dhahachuun dabali qabsoo ummatni oromoo godheen, Qeerroo fi Qarreen godheen akkasumas WBO godheen yeroo moo’amutti tooftaa garaa garaa bartee aangoorra of tursuudhaaf afaan oromoo haa dubbatu ,oromoof waan quuqamaa haa fakkaatu malee mootummaa kun ammayyuu Akeeka oromoo qabaannaan jiru. Inumayyuu Siena boodatti hafaa kaleessa darban kanneen akka bara H/sillaasee, bara milk, bara dargis Ethiopia jimilaadhaan dimshaashumatyi walitti qabanii afaan amaaraadhaan, afaan abashaadhaan, afaan nafxanyaa keessatti olaantummaa argatanijaaruudhaaf Warren mirga hiree qabsaa’aniif Bilisummaaf qabsaa’an gaaffii sabaa dhiphootaa fi kkf jechuun haalli mootummaa kanaa inumayyuu waggoota 27darban caalaa gara hammeenyaatti deemuu isaatu nutti mul’ata.
Harka kennatanii maaliif hin galle ummatni oromoo isiniif jedhee du’aa jira, isiniif jedhee hidhamaa jira jechuun ummatni oromoo nuuf jecha hidhamaa du’aa hin jiru.
Ummatni oromoo gabrummaa jala jira hanga gabrummaa sana hunkuteessee jalaa bahuutti hidhamuun, ajjeefamuun numa jiraata. Sababa keenyaaf hidhamee sababa keenyaaf ajjeefamee waan waggoota 27 hundayyuu?
Ummatni oromoo jaarraa 1/2 as osoo ajjeefamuu as gahe. Ajjeechaa sana hanbisuuf qabsoofne. Kan ummata oromoo ajjeese sababa keessan jechuun sirrii miti.
Nuuf jecha hin ajjeefamne ummatni oromoo. Ummatni oromoo kan ajjeefameef waan abbaa biyyummaa isaa gaafatee, waan gabrummaa hin deemu bilisa tahuun qaba, biyya mataa kootii ijaarrachuun qaba,mirga hiree murteeffannaa kootiibargachuun qaba waan jedheef ajjeefame.
Dr kadida: kanatti aansee waa’ee filannoo isin gaafadha. Gar tokkeen hoggansi keessan durii Finfinnee keessa taa’anii nagaadhaan gara filannootti deemna jechaa jiru. Filannoon kun nagaa ta’a jettee yaaddaa? WBOn akkamiin ilaala filannoo dhugaa jiru kana?
Jaal Goollicha: Miseensi dhaabaa, miseensi jaarmiyaa kanaaf haalli mootummaan Ethiopia ammayyuu itti jiru hoggansa karaa nagaa galmaan gahuu dandeessan jedheekan waliif mallattteesse sana karaa nagaa galmaan gahuu dhiisii gidduu kanattuu osoo filannoo sun hin gahiin hoggansa biyya jiru sana kanuma dhaabaa maaltu irra gahaa jira?
Akka herregametti akka himametti deemaa jiraa jennee yoo yaadnu bosona keessa jiraannullee gurra keenya hin duuchanne gosa midiyaa adda addaa hordofaa jirra. Addunyaan keessaa jirru Addunyaa globalizationiti . Bosona jiraannullee carraa xiqqoo arganneen biyyi kun gara kamitti deemti jennee ilaaluu dandeenya hordofuus dandeenya. Karaa nagaan kan milkaayu yoo tahe gaariidha. Akka ABOn yaadutti kan deemu yoo tahe gaaffiin ummata oromoo deebii argachuu dandaha. Yoo sun hin taane guutummaatti ABO haalli mootummaa Ethiopia itti jiru qabsoo karaa nagaa haanjessaa hin jiru. Fkn Qeerroo fi Qarreen jijjiirama kabeebsaa jedhamu sana dhalchanii Dr Abiyyiin fi lammaa aangoo gubaatti fidan sanayyuu kumaatamni hidhamaa jiru.
Fkn Godina Booranaa keessaa namni 600- 700 hidhamee jira. Oromiyaa guutuu yoo xiqqaate namni 5000- 6000 hidhamee jira. Kanaaf gaaffiin abbaa biyyummaa oromoo mootummaa Abiyyii jalatti deebii waan argataa jiru hin fakkaatu. Inuma dhiphoota warra biyya diiguu barbaadan jechaa jira. Warroita mirga hiree murteeffannaa gaafatan,warriors Bilisummaa sabaa ,walabummaa biyyaa gaafatan abaaraa Ethiopia akka keetti deemsifna,Ethiopia itti fufsiifna jedhan kun opdo kaleessa argamtus TPLf turtee fi ODP har’aa ergamtuu warra araaraa turedha. Biyya Ethiopia jedhamtu kana balleessuuf deemani isaan kanaaf osoo isaannbiyya kana hin balleessine isaaniin dursine balleessina jedhee paarlaamaa keessa taa’ee yeroo Dr Abiyyii haasa’u Muller bosona keessumaa teenyee dhageenye jechuudha. Kanaaf yeroo akka hoggansi ABO yaadetti kan milkii argatu tahe gaariidha wanti mul’ataa jiru garuu faallaadha.
Mootummaan kun jibbinsaa fi tortora waggaa 27 ummata biratti jibbamee,tortoree, samee ummataan waan tufameef afaan toluudhaan damma tolfatee laga ittiin cee’uudhaaf, Tulluu ittiin bahuuf yeroodhaaf akka inni itti ummata oromoo sobee goyyoomsaa haa deemu malee mootummaan kun deebii ummata oromoo deebisuuf onnee hin qabu, sammuu hin qabu, dandeettii hin qabu,haamilee hin qabnedha.
Dr Kadida: waa’ee Finfinnee hoo maal jettu?
Finfinneen kan oromoo miti jedhama , WBOn akkamiin ilaala?
Jaal Goollicha: Finfinneen handhuura oromiyaatti. Biyya oromooti. Kaleessas kan oromooti,har’as kan oromooti borus kan oromooti. Duraanuu gabroomfataatu nurraa fudhate ,boru gaafa oromoon bilisoome ummatni oromoo Finfinnee abbaa itti godha iddoo dhaqxun qabdu.
Dr Kadida: oduu gidduu kana odeeffama jiru mararaa mootummaa keessatti Mangaa jedhanii dubbatanii abcarian bosona keessatti dhageessaniittuu?
Jaal Goollicha: sirriitti dhageenyee jirra namni hin dhagahiin hin jiru. Addunyaan mandara tokko tahee jira waan dubbatamu dafee dhagahama.
Dr Kadida: akkamitti ilaaltu isin saba oromoo mangaa jedhanii yaamuu?
Jaal Goollicha: akka nuyi itti ilaallu warra kaleessa dheengadda mootummaa oromoof hin gaddine har’a rifatee barraagee Abiyyiin kana godhe, Abiyyiin oromoo ganee kana godhe jedhu. Garuu nuyi guyyaa tokkollee Abiyyii mootummaa oromoo jennee hin beeknu, waanti masaraa mootummaatti Abiyyii nafxanyoota walitti qabee nu arrabse sun nuuf haaraan turre. Ittin barragne, kaleessas akkasumatti hubachaa turre, kanaaf nuuf haaraan turre.
Dr Kadida: xumura irratti egaa kan hafe jettu ibsachuun narra jira jettu dubbadhu carraan siif kenna .
Jaal Goollicha: Ani kanin jechuu barbaadu ummata oromoo bal’aaf, Qeerroo oromotiif, Qarree oromootiif, Hayyuu oromootiif, lammii oromoo saba oromoo biyya keessaa fi ala jiraatu hundaaf dhaamsi koo dhugaan jiru bubbulteetuma as dhohaa jira
Oromoonni kaleessa mootummaan oromoo ijaaramee jettan, warreen kaleessa qorqalbii akkasiin ilaaltan waliin wacabbartan dhugaa galfata ummata keessan kaleessaa galfata haadholii keessanii, galfata Abboolii keessanii, galfata Hassan keessanii, galfata Akaakilee fi Abaabilee keessanii, galfata ilmaan keessanii qaalii qabsoo kanaaf jecha warra waggaa dheeraa bosonatti of titimanii gariin lubbuun du’aniru, gariin osooma Akeeka qabsoo ilmaan oromoo galmaan gahuuf jedhanii umiriin irraa sokke, kanneen gariin qaamaa itti hir’atee dhugaa kana beektanii mootummaa Ethiopian inumayyuu mootummaan dr Abiyyiin mootummaa EPRDF kan TPLfn durfamu kan kaleessaa sanayyuu caalaa mootummaa sirna boodatti hafinsa sirna Ethiopia aadaan amaaraa iffisee beekamtu, afaan amaaraa keessattuu olaantummaa argatan seenaan amaaraa bakka qabatee ,seenaan shoots hafanii bakka dhabdee tahuun Ethiopia kaleessa jaarra 1/2 gatiittii keenya irratti dhiichisu baate,reeffa abbootii
keenya irratti haadholii keenya irratti, shamarran keenya irratti, Qeerroo fi Qarree keenya irratti dhiichisaa baate sana dagachuu diduudhaan dhugaa jiru hubattanii WBO hamman hammaatee bosonatti osoo hin hafiin adeemsa mootummaa Ethiopia inni isaan jedhan kan tooftaaf muudan tahuu isaa hubattanii jaalleewwan keenya kaleessa biyya isaaniitti karaa nagaa galan
rokkooleen,hiraarsi,hidhaan ,gidiraan biyyaa ariyuun, ajjeesuu fi ukkaamsaan Warren qabsaa’ota oromoo biyya keessa jiranitti dararaa raawwatu, nuyi galfata Abbootii keenyaa karaatti hin hanbisnu jennee bosona keessatti ummata oromoo danbalii godhannee qabsoo keenyas qabsoo kaleessa walitti hirkannoon waan taheef har’as kan walitti hirkannooti.
Kaleessas ummata oromootu nu nyaachisaa ture, nu hidhachiisaa ture har’as ummata oromoo sana keessa jirra walumaan jirra wanti adda biraa hin jiru.
Deeggarsa WBOf tolchaa Midhaan Bishaan waan dandeettii keessan keessa jiru hundaa karaa beekumsaa, karaa nyaataa WBOf dirmachuudhaan haala yeroo ammaa kana jajjabeessinee kana caalaatti fufna waan tahuuf hundi keessan oromoon bakka jirtanitti nuuf jiraadhaa.
Dhaamsa WBO kanas nurraa fudhaa.
Kan barreeffamatti jijjiire sagalee Qeerroo Bilisummaa oromooti.
Injifannoon ummata cunqursamaaf!
#jaal_golicha_dheengee bara 2000 bara miliniyemii Xophiyaa guyyaa ayyaannicha miidhaksuuf….
Dhiira mataa jeneraala Tigre MUREE duuba konkolaataa makalaakayaatti hidhee Finfinneetti galcheedha.
Umriin keessaan ammallee nuuf haa turu